काठमाडौंमा कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्षयताकै सस्तो ,किलोको जम्मा यति पर्छ हेर्नुहोस ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौंमा कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्षयताकै सस्तो ,किलोको जम्मा यति पर्छ हेर्नुहोस !
ल कडाउन अवधिमा मासुको व्यापार राम्रै भएपनि दोस्रो पटकको नि षेधाज्ञाले व्यापार चौपट भएको उनको दाबी छ । मासु खपतका लागि सरकारी योजना नभएको र म’हामारीकै बेला आइपरेको सं कटले व्यवसायी पनि अन्योलमा परेको घिमिरेले बताए । सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा दैनिक साढे दुई लाख किलो मासु बिक्री हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले सवा लाख किलो मात्रै मासु बिक्री भईरहेको संघले जनाएको छ ।
ब्लड प्रेसर हाई छ ? यी १७ टिप्स बारे जान्नुहोस्